Itoobiya Oo Sheegtay Inay Sameysanayso Maraakiib Dagaal!! Halkee Bay Saldhiganayaan? - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » Itoobiya Oo Sheegtay Inay Sameysanayso Maraakiib Dagaal!! Halkee Bay Saldhiganayaan?
Itoobiya Oo Sheegtay Inay Sameysanayso Maraakiib Dagaal!! Halkee Bay Saldhiganayaan?
Ra’iisulwasaaraha Itoobiya, ninka lagu magacaabo Abiy ayaa shaaca ka qaaday in ay sameysanayaan maraakiib dagaal si buu yiri’ loo xoojiyo awoodda difaac ee dalkooda.
Magaalada Adis-ababa, ayuu maalintii shalay ka sheegay in Itoobiya ku guuleysatay iney dhisto ciidankeeda dhulka iyo cirka, haddana ay si dardar leh ku wadaan dhismaha ciidanka Badda iyo maraakiib dagaal.
Xilli uu ka hor hadlayay hormuudka wasaaradda Gaashaandhigga iyo saraakiil kale ayuu si jees jees ah u sheegay in qorshhan uu meel wanaagsan u marayo. Wuxuu intaasi ku daray in Itoobiya ay leedahay machad dadka lagu baro cilmiga badda, sannad walbana ay soo saaraan dad badan.
Sidoo kale wuxuu sheegay iney Layli dadkan ku siiyaan Harta lagu magacaabo Taana oo kamid ah meelihii uu gaaray maamulkii Al-imaam Axmad Gurey.
Ilo wareedyo muhim ah oo ay ku jiraan saraakiishii hore ee Badda Soomaaliya ayaa sheegay in qorshahan ay wado Itoobiya uu halis ku yahay jiritaanka ummada Soomaaliyeed, waxaana ay sheegeen in maraakiibta dagaal ee Itoobiya sameysanayso xarun ka dhiganayaan dekedda magaalada Berbera, oo dhawaan iyada iyo Imaaraadku lacag yar uga badasheen Somaliland.
Sidoo kale wariyaha lagu magacaabo Raage Oomaar, ayaa sheegay in maraakiibta dagaal ee Xabashidu saldhigan doonaan dekedda magaalada Berbera kadib markii %19, laga siiyay saamiga dekeddaas, iyadoo illaa iyo hadda lala yaaban yahay waxa ay ku muteysatay.
Ma jiro maanta dal ogol in ciidamo badeed oo Itoobiyaan ah uu siiyo deked, waxaana iska cad sida ay maanta Xabashidu ugu dhiiranayso iney boobto badaha Soomaaliya, oo ay awooweyaasheen qarniyo badan ka hor taagnaayeen.
Sannadkii 2012, ayay xeebta magaalada Jabuuti kusoo bandhigtay sagaal markab oo ay soo Iibsatay, waxaana muuqanaya in Xabashida oo aanan bad lahayn ay maanta doonayaan in badda, barriga iyo hawadaba ay ka qabsadaan Soomaaliya, iyagoo waliba qaba cadaawad gaamurtay oo taariikhi ah, maadaama ay yihiin dadkii ay muslimiinta geeska Afrika diinta gaarsiiyeen, intooda gaalada ahna jisyada ka qaadi jireen.